हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको तरकारीको मूल्य, कुनको कति ? Canada Nepal
हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको तरकारीको मूल्य, कुनको कति ?
काठमाडौँ - शनिबार नेपाली बजारमा केही तरकारीको मूल्य घटबढ भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका अनुसार अहिले प्याजको थोक मूल्य किलोको ६८ देखि ७० रुपैया रहेको छ ।
त्यस्तै आज गोलभेडाको मूल्य किलोको २० देखि २५ रुपैया, आलु किलोको २४ देखि २६ रुपैया, फर्सी किलोको३० देखि ३५, मुला किलोको २५ देखि ३०, भेण्टा किलोको ५० देखि ६०, गाजर किलोको ५० देखि ६०, बन्दा किलोको १२ देखि १६ रुपैया र काउली किलोको २० देखि २५ रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै घिउ सिमि किलोको ७० देखि ८०, भिण्डी किलोको ११० देखि १३०, लौका किलोको ५० देखि ६०, बरेला किलोको ४० देखि ५० र रायोको साग ४० देखि ५० मा किनबेच भइरहेको छ ।
फाल्गुण १५, २०७७ शनिवार ०९:०२:०६ बजे : प्रकाशित